#EXCLUSIVE भिडियो : दार्जिलिङमा देखियो पल र आँचलको यस्तो क्रेज- पल र आँचललाई बचाउन दार्जिलिङ प्रहरीलाई हाम्मे हाम्मे ? (तस्बिर भिडियोसहित) « Light Nepal
#EXCLUSIVE भिडियो : दार्जिलिङमा देखियो पल र आँचलको यस्तो क्रेज- पल र आँचललाई बचाउन दार्जिलिङ प्रहरीलाई हाम्मे हाम्मे ? (तस्बिर भिडियोसहित)
Published On : 14 January, 2018 5:26 pm
म्युजिक भिडियो हुदै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रबेश गरेका नायक पल शाह र उनको कोस्टार आँचल शर्माको लोकप्रियता नेपाल मात्र होईन दार्जिलिङमा पनि देखिएको छ । हालै यी दुई दार्जिलिङ पुलिसले आयोजना गरेको म्याराथनमा नेपालबाट अतिथि बनेर पुगेका थिए ।जुन कार्यक्रममा पल र आँचलको लोकप्रियता देखेर हरकोही लोभिन सक्छन् । कार्यक्रममा उपस्थित भएका दर्शकहरुको भिडबाट पललाई जोगिन हम्मे हम्मे परेको थियो ।
पल पल भन्दै चिच्याईरहेका उनका फ्यानहरुले उनलाई स्टेजमै घेरेका थिए । पल र आँचलकसंग फोटो खिच्न , अंकमाल गर्न र अटोग्राफ लिन आउनेहरुको भिडबाट पल आँचलललाई जोगाउन कठिन देखिनथालेपछि दार्जिलिङ पुलिसका डि. एस .पी सिद्धार्थ दोर्जी ट्राफिक प्रमुख दोर्जे शेर्पा र सब इन्सपेक्टर मिलन गुरुड ले ५० भन्दा बढि प्रहरीको साथमा पललाई मुस्किलले होटल सम्म पुर्याएको थिए ।
पल र आचलका का फ्यानहरुले होटलको गेट नछोडेपछी प्रहरीले पुन पललाइ दर्शकमाझ उभ्याउनु परेको थियो । उता भिडको बावजुद पनि पल आफना प्रशंकहरुको मन राख्न चाहान्थे किनकी पल आज जे छन् त्यो प्रशंसकहरुकै मायाले हो भन्ने उनले राम्रोसंग बुझेका छन् । कतिसम्म भने पलको लागि दिनभर होटल बाहिर कुर्ने युवतीहरु पनि थिए ।
पल र आँचलको लोकप्रियता देखेर नै उनीहरुको लागि कडा सुरक्षा गरेको आयोजकले बताएको छ । नेपाली सेलिब्रेटीहरुले दार्जिलिङमा यती कडा सुरक्षा पाएको सम्भवत पहिलो नै होला । यतिको माया र सम्मानबाट पल र आँचल दुबै गदगद थिए ।
नेपथ्य हेर्न यसरी उर्लियो जनसागर (भिडियोसहित)
पाँचथर, ३ माघ । बेलुकाको ठिक ५ बज्यो, पूर्वका पहाडी जिल्लाका दर्शकहरु १ घण्टा अगावै
साथीहरु खेलेर कोठामा पुग्दापनी मैदानमै ‘फ्यान’ ले घेरिएर बस्ने कर्णको यस्तो छ रोचक कथा (भिडियोसहित)
पाँचथर, ३ माघ । झापा ११ मोफसलमा चर्चित फुटवल क्लब हो । सम्भवत नेपाली फुटवलमा